प्रदीपका नजरमा 'शत्रु गते' :... :: अशेष अधिकारी :: Setopati
प्रदीपका नजरमा 'शत्रु गते' : आफ्नो फिल्मलाई धेरै माया गर्दिनँ, १०मा ८ नम्बर दिन्छु
'जात्रा' फिल्मले प्रदिप भट्टराईलाई नेपाली फिल्मको नयाँ पुस्ताको आशालाग्दो अनुहार बनाइदियो। 'जात्रा' दर्शक र समिक्षक दुबैको नजरमा गज्जब बन्यो। त्यसैले बिगत आधा शताव्दीदेखी नै ढुल्मुलाउँदै र धरमराउँदै अघि बढेको नेपाली फिल्म उद्योगका लागि प्रदिप एउटा आशाका किरणका रूपमा देखिएका छन्। समयक्रमले उनको स्तर ठयाक्कै के हो?, विस्तारै निर्धारण गर्ला। लामो समय नेपाली हास्यविधाबाट २-३ पुस्ताकै नजरमा सफल गनिएका महजोडीलाई सहायक बनेर सघाइरहेका प्रदिपको दोस्रो फिल्म 'शत्रु गते' भोलि शुक्रबार रिलिज हुँदैछ। पहिलो फिल्म ल्याउँदा आफू विना दबाब प्रस्तुत भए पनि दोस्रो फिल्मको नतिजालाई लिएर दबाबमा रहेको प्रदीप बताउँछन्। उनै प्रदिप भट्टराई सेतोपाटीका लागि अशेष अधिकारी सँग गफिदा यस्तो सुनिए :
पहिलो फिल्मको सफलताको दबाब दोस्रो फिल्ममाथि कतिको परिरहेको छ?
पहिलो फिल्ममा दबाब नै थिएन। नाम हुँदा पो बदनामीको डर हुन्छ। त्यसले गर्दा म कुनै दबाबमा थिइन तर यसमा आफ्नो नामको दबाब त छँदैछ त्योसँगै यसपटक टिममा त्यस्ता त्यस्ता मान्य हस्तिहरू हुनुहुन्छ। मलाई आफ्नोसँगै उहाँहरूको नाम बिगार्न नहुने दबाब छ। त्यस हिसाबले धेरै दबाबमा छु।
त्यो दबाबलाई लिएर मनमा कस्तो कुराहरू खेल्छन्?
अब सोचेर त फाइदै छैन्, त्यो सबै फिल्मको स्क्रिप्ट फाइनल गर्नु अघि सोच्नुपर्ने कुरा हो। त्यो तय गर्दा यतिको स्क्रिप्टमा आउने दबाब झेल्न सकिन्छ, राम्रो फिल्म निस्कन्छ भन्ने सोचेर नै सुटिङमा गएका हौं। भगवानका त आ-आफ्ना भक्तहरू हुन्छन् ,यस्तोमा सबैलाई खुशी पार्न त नसकिएला तर जसको लागि फिल्म तयार गरेका छौं, उहाँहरू धेरै जनाको मन जित्छौं।
जसको लागि भन्नाले कसको लागि, को को पर्छन्?
'जात्रा' मनपराउने दर्शकहरूका लागि त भयो नै । यसैगरी दीपक दाइ (दीपकराज गिरी)हरूको टिमलाई मनपराउनेहरूको अनि मदन दाइ, हरि दाइ, जसलाई वर्षौदेखि जुन दर्शकले मनपराउँदै आउनुभएको छ, उहाँहरूको मन जित्छ भन्न खोजेको हुँ। पल र आँचलका पनि छुट्टै दर्शक छन्। यी सबैलाई मध्यनजर गरेको छु। यस फिल्मबाट उहाँहरू धेरै हदसम्म खुशी हुनुहुनेछ।
पहिलो फिल्म र दोस्रो फिल्म एकआपसमा कति फरक छन्?
धेरै फरक छ। दुबै सोसल ड्रामा नै हुन् तर कथा भन्ने शैली फरक छ। क्यानभासको हिसाबले 'शत्रु गते' ठूलो फिल्म हो । 'जात्रा'मा चलेका कलाकार त्यति हुनुहुन्थेन यसमा सबै चलेका कलाकारहरू हुनुहुन्छ।
तुलनात्मक रूपले 'जात्रा' हेरि यसबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउने अनुमान गरिरहनुभएको छ?
'रियाल्स्टिक' फिल्म हुनुपर्छ भन्नेहरूले 'जात्रा' मनपराउनुभएको छ, तर त्यसो भनिएता पनि मैले उहाँहरूले त्यसको मनोरञ्जनात्मक पाटोलाई मनपराउनु भएको मेरो बुझाइ छ। दर्शकले फिल्मले बाँध्छ कि बाँध्दैन भनेर नै फिल्म हेर्नुहुन्छ। बाँध्यो भने न दर्शकले मनपराउनु हुने हो नत्र जति नै यथार्थवादी भए पनि फिल्म दर्शकले मनपराउनन्। बनावटी छकी छैन् भन्ने कुरा त पछि मूल्याकंन हुन्छ। 'शत्रु गते'मा पनि हामीले त्यही गरेका छौं। 'शत्रु गते' फिल्म 'लार्जर देन लाईफ' हुनुपर्छ भन्ने कुराको नजिक छ तर यथार्थको धरातल पनि उत्तिकै छ। हामीले दर्शकको मनोरञ्जनको अपेक्षालाई एकदमै ध्यान दिएका छौं।
फिल्ममा धेरै वरिष्ठ र लोकप्रिय कलाकार आफ्नो पृष्ठभूमिसहित हुनुहुन्छ, त्यस्तोमा तपाई निर्देशकका रूपमा फिल्ममा छुट्टिनुहुन्छ कि हुँदैन्?
यत्रो मान्छे हुनुहुन्छ, सबैको आ-आफ्नो बोलबाला छ। त्यसरी सोचेर फिल्म बनाउने हो भने त फिल्म नै बन्दैन। संसारभर जो कुनै कलाकारको फिल्ममा देखिने स्वरूप फरक हुन्छ तर अभिनयको पाटोमा उनीहरूको 'स्टेरोटाइप' हरेक फिल्ममा झल्किहाल्छ। यस मानेमा मेरो फिल्म पर्दैन, छैन् म भन्दिन तर मैले निर्देशकका हिसाबले कलाकारलाई जुन हिसाबले प्रस्तुत गर्न खोजेको छु, त्यसमा मैले यो ठूलो कलाकार हो जे गर्छ ठिक गर्छ भनेर छोडेको छैन्, मैले मेरो कथाअनुसारको कमाण्ड सम्हालेको छु।
निर्देशकिय अधिकारलाई मैले कस्तो फिल्म बनाउन लागेको हो, त्यही अनुसार पर्दामा ल्याएको छु। फिल्ममा मानिसले ठूला कुरा भन्दा पनि सानो कुरालाई बढि 'नोटिस' गर्छन्। मैले ती कुरामा मेहेनत गरेको छु, कुनै सम्झौता गरेको छैन्। सानो सानो कुरा जोडेर ठूलो कुरा देखाएको छु। फिल्ममा मैले गर्ने र दिने भनेको त्यही हो। यसमा उहाँहरूको थप प्रयासलाई पनि ग्रहण गरेको छु। त्यसैले यो फिल्ममा निर्देशक हराउँदैन्।
फिल्म लक भइसकेको छ, आफ्नो फिल्म हो भन्ने बिर्सेर हेर्दा कस्तो फिल्म बनेको छ? १० मा कति नम्बर दिनुहुन्छ?
आफ्नै फिल्मको रेटिङ गर्न गार्हो हुन्छ। त्यसमाथि एउटा ठाउँमा पुगेपछि फिल्म मेकर शुन्य हुनेरहेछ। स्क्रिप्टदेखि हेरेको फिल्म हेर्दा हेर्दा स्याचुरेटेड भइने रहेछ। फिल्म राम्रो बनेको छ की नराम्रो भन्ने दुविधा हुने। मैले मेरो फिल्मलाई एकदमै गज्जब भन्नु हुँदैन । धेरै माया देखाउनु पनि हुँदैन्, त्यसैले म १० मा ८ दिन्छु।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत ८, २०७४, १०:१२:३९
नेपाली रंगमञ्चमा नेपाली कथा खै?- कविता श्रीनिवासन
अरूकोसँग भन्दा पनि आफ्नै फिल्मसँग डराइरहेकी छु: दीपाश्री निरौला
'कथा काठमाण्डु रंगीचंगी शहरको अँध्यारो कथा '